Ireo mpanara-maso GPS avo indrindra ho an'ny marary mijaly amin'ny Dementia - Vahaolana OMG
Tsy fampahalalana vaovao fotsiny izany fa matetika ireo marary tsy fahita firy no mivezivezy samirery, raha ny zava-misy, ny fikambanana Alzheimer dia nanao fikarohana ary nanatsoaka hevitra fa ny 6 amin'ny marary 10 dia matetika nirenireny. Tsy vaovao tsara izany raha ny fanamafisana bebe kokoa, ny antony manara-maso akaiky sy ny maso mijery tsara dia tsy maintsy apetraka amin'izy ireo. Zava-dehibe ny hahafantaranao ny fihetsik'izy ireo ary afaka milaza amin'ny toerana misy azy ianao na dia tsy mifanatrika azy ireo aza ianao. Tato ho ato izay dia efa nisy ny famoronana maro be, izay manjary mora foana izany. Avy amin'ny pendant, ny fehin-kibo ary ny smart smarty dia afaka ampiasaina hikarakarana an'ity olona tena ilain'ny tsirairay ity izay manana tombontsoa be dia be.
Ny fikarohana nataon'ny fikambanana dia nanamafy ihany koa ny olona tsirairay dia matetika no hita 1 kilaometatra na antsasaky ny misy azy ireo tamin'ny voalohany. Ny mandehandeha dia sehatra fahitana manokana ary tsy maintsy voamarika tsara ary jerena, satria eo am-pitandremana ireo famantarana manokana fa ny marary ireo dia tena manadino. Isaky ny tsikaritrareo ny fianakavianao manana filàna manokana dia nanjavona mandritra ny fotoana maharitra; mety mihazakazaka etsy sy eroa fivarotana izy ireo, mihemotra mihemotra na mijery very tanteraka amin'ny tontolo iray. Avy eo dia fotoana hanaovana drafitra lehibe raha sendra misy trangan-javatra mety hitranga rehefa tsy mety manodidina na misy ianao.
Zava-maniry mitombo haingana be ny fanaraha-maso ny toerana, misy koa ireo teoria-tsikombakomba mino ny folo taona ho avy, dia harahina ny rehetra. Afaka manaraka ny zanany ny ray aman-dreny ary afaka manara-maso ny ray aman-dreniny koa (ireo antitra). Na ny serivisy ara-pahasalamana aza dia mampiasa ny mpanara-maso GPS amin'izao fotoana izao hanaraha-maso ny marariny indrindra indrindra ireo izay afaka be saina.
Ny fanasokajiana fahasamihafana an'ireo mpanaraka ireo dia:
Ny teknolojia fanaraha-maso
Nanjary nilaina ho an'ny olona rehetra ny fananana telefaona ankehitriny, dia manan-telefaonina ireo finday ankehitriny. Manome lalana mora tadiavina ny finday satria samy manana GPS ao anaty izy rehetra ireo dia azo tanterahina kokoa raha toa ka alefa ny telefaona. Ity rafitra fototra ity dia mampiasa famantarana roaming amin'ny telefaona, mampifandray azy ireo amin'ny tilikambo akaiky indrindra. Amin'ny toerana misy ny tilikambo, ny toeran'ny fitaovana dia azo kajy miaraka amin'ny multilateralism. Mampiasa rafi-toerana misy hibrida ny finday ankehitriny, ny rafi-pandehanana dia misy ny fiampitana ny GPS sy ny tsindry sela akaiky azy. Ny GPS dia miasa tsara kokoa any an-tanimbary malalaka izay nisy fehezanteny tsara, ho an'ireo izay mifindra manodidina ny tanàna dia mora kokoa ny mamita azy ireo amin'ny fampiasana WIFI any amin'ny toerana samihafa.
Ankehitriny dia nohazavaina ny teknolojia fanaraha-maso dia ny fampidirana karatra fantsom-pahafaham-pandresena (SIM) amin'ny karatra, fitaovana vita amin'ny tànana, na ny mpanaram-bidy aza. Raha ny momba ireo fitaovana ireo tsy misy alàlan'ny paositera karatra simika dia azo zahana tanteraka amin'ny alàlan'ny satelita na Bluetooth amin'ny alàlan'ny mpivady amin'ny finday akaiky eo. Saingy raha afaka mandefa sy mahazo data dia mila tambajotra tambajotra ihany ny fitaovana rehetra mba ahafahana mifindra data. Azo dinihina ihany koa rehefa mifidy trackers ho an'ny marary dementia.
Ny fikarakarana faharetana
Ny tombantombana iray dia naneho fa mihoatra ny 850,000 olona mipetraka any Angletera no mijaly amin'ny «dementia», kanefa ny antsasaky ny mponina ihany no voakitika. Toy izany koa ny toe-javatra iray maneran-tany, raha ny marina, maro hafa no tsy nahita fa vitsy dia vitsy ny firenena. Ny olona efa nanao fitiliana dia tokony hanontany vonjy ho an'ny ivotoerana manokana na mpitsabo momba ny fahasalamana. Sehatra tena hafahafa ny Wandering ary be dia be izy io, 40% ny marary dementia matetika mandehandeha any ivelan'ny tranony, nony farany dia very izy ireo ary tamin'ny fotoana nahitana fa mety maty izy ireo.
Ny firenena sasany dia manana rafitra mifototra telecare sy fanairana miaraka amin'ny mpiasa vonona hamaly ny antso avy amin'ireo marary Dementia. Amin'ny tranga toa an'io dia amin'ny sarany kely dia afaka misafidy ny ho tompon'andraikitra amin'ny marary izy ireo ary handray andraikitra feno ny toerana misy azy ireo sy ny toerana misy azy. Matetika izany rehefa misy mpanome tolotra iraisan'ny orinasa tsy miankina hametraka ny mpanara-maso ny marary azy hanohy hahalala ny toerana misy azy ireo.
Mpampiasa manokana natao manokana
Betsaka ny orinasa teknolojia no manao trackers izao, ary miara-miasa amin'izy ireo ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny famatsiana mivantana ny fampiasana azy ireo. Ohatra iray amin'izany fitaovana izany ny GPS014D; ho an'ny vidiny manodidina ny $ 238 ary tsy misy fonosana famandrihana isam-bolana na inona na inona, dia fanaraha-maso ihany koa ho an'ny zokiolona sy ny ankizy. Izy io dia hitafy toy ny pendant mahazatra hafa eo amin'ny tendany. Manana tracker GPS napetraka ao anatin'io izy io izay manara-maso ny hetsika ataon'ireo ankizy mila aina manokana, manana fakantsary izay mandefa hafatra SOS amin'ny sary miaraka amin'ity sary ity fa tsy vitan'ny mahazo ny fanairana fa ianao koa mahita izay nitranga. Fitaovana karazana 2 fomba, midika izany fa tsy afaka mandray azy fotsiny ny hafatra fa afaka alefa any aminy ihany koa.
Ohatra iray hafa amin'izany fitaovana izany dia ny OMGGPS10D, rojo fanalahidy iHelp 3G / 4G GPS. Izy io dia rano madio miaraka amin'ny sensor tsy mihetsika sy latsaka, fitaovana tonga lafatra ho an'ny zokiolona voan'ny dementia. Azo ampiasaina hanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy io ny toe-javatra misy ny tokan-tena. Ny iHelp dia afaka manosika ny SOS hiantsoana manokana ny 5 hanome fanampiana avy hatrany. Tsy maintsy manampy be dia be ianao raha toa ka zokiolona zokiolona miaina irery ary mijaly fahatsiarovana tsindraindray, mety ho tena manampy anao ny fijerena azy ireo sy ny valiny haingana amin'ny vanim-potoana mety hitranga. Ny sasany mampiavaka ilay rojo fanalahidy lehibe dia:
Fampandrenesana rehefa mivezivezy na very any amin'ny toerana tsy mahazatra ny mpampiasa
Fanairana azo antoka rehefa ao an-tranony ny zokiolona
Ny rafitra GPS dia afaka manome fiarovana pf azo antoka rehefa mandeha ary manao ny lalana sarotra ho mora tadidina ho an'ny olona very fahatsiarovana, dia mora ho an'ny rehetra izay voakasiky ny farany.
6496 Total Views 1 Views Today